Jiolahy telo mitondra zava-maranitra no nanafika trano iray teny Ambohimanambola, omaly tamin’ny 1 ora sy sasany maraina. Nofatoran’ireo jiolahy sy nokapohiny ny zava-maranitra ilay rangahy ary ilay vehivavy notereny hamoaka ny vola tao aminy saingy tsy nisy izany. Naratra ilay rangahy tompon-trano, voaroba ny télé écran plat iray, tablette iray, ordinateur portable iray, finday, firavaka volamena sy vatosoa.
Nalefa teny an-toerana avy hatrany ny zandary avy ao amin’ny PA Ambohimanambola, izay mbola tany am-panaovana fisafoana amin’ny alina tany amin’ny faritra hafa, raha vao nahazo ny antso saingy efa lasa ireo jiolahy. Nalefa notsaboina any amin’ny HJRA ny naratra. Mitohy ny fikarohana ireo jiolahy.
Hitan’ny fokonolona maty nitsirara teo amin’ny lalan-tany mampitohy an’i Sadabe sy Amboanemba ny lehilahy iray 30 taona, sefom-pokontanin’Amboanemba sy ny moto an’ny dokotera CSB II nentiny, ny alakamisy tamin’ny 10 ora alina. Hita nianjera sahabo 10 m miala azy ilay moto io. Araka ny fijerin’ny olona, ny fianjerana tamin’ny moto no nahafaty azy. Nidina eny an-toerana nizaha ny loza ny dokotera. Misahana ny raharaha ny zandary ao Sadabe .